ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှာ ချစ်စရာသမီးကလေးမွေးခဲ့တဲ့ Kylie Jenner - MoviesFan
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှာ ချစ်စရာသမီးကလေးမွေးခဲ့တဲ့ Kylie Jenner
သုံးနှစ်ကြာလက်တွဲလာတဲ့ Tyga နဲ့ လမ်းခွဲပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Travis နဲ့ date ခဲ့တဲ့ Kylie ကတော့ သူကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ ကာလတလျှောက်လုံးမှာ ဘာကြောင့် လျှို့ဝှက်နေခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပါရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ကျော်ကြားမှုဒဏ်ကိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ခံခဲ့ရတဲ့ Kylie ဟာ သူ့သမီးလေးကိုတော့ စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကို ပေးချင်မိတယ်လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပြီး သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းသောပျော်ရွှင်မှုတွေကို လျှို့ဝှက်နေမှသာ ရနိုင်မှာမို့လို့ ဒီလိုလျှို့ဝှက်ထားမှုကို ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ကြောင်း ဆက်ရေးထားပါတယ်။ သူ့ကိုနားလည်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိသားစု မောင်နှမတွေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ဒီသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှဟာ သူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့ တွန်းအားဖြစ်ပြီး မမေ့နိုင်စရာမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း စသဖြင့် ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ပါသေးတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ သူ့သမီးလေးပုံကို တရားဝင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် သူကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့စဉ်ကာလကနေစပြီး ကလေးမွေးခဲ့တဲ့အချိန်ထိ အမှတ်တရ ဗွီဒီယိုလေးကိုတော့ သူ့ youtube မှာ တင်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိလက်တွဲဖော်ဖြစ်တဲ့ Travis ကလဲ သမီးလေးအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေလဲပါပါသေးတယ်။ ဒီကလေးကတော့ Travis Scott နဲ့ရတဲ့ ကလေးဖြစ်ကြောင်းပြောထားတာဖြစ်ပြီး အရင်ရည်းစားဖြစ်တဲ့ Tyga ဆီကတော့ တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
Kylie ရဲ့ အမေဖြစ်တဲ့ Kriss Jenner ကတော့ သူ့ instagram account မှာ Kylie ရဲ့ message နဲ့ သူတို့အတွဲကမ်းခြေမှာကြည်နူးနေကြတဲ့ post ကို share ထားခဲ့ပြီး မိသားစုဝင်အသစ်ကလေးကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်ကြိုနေတယ်လို့ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်အမေတယောက်ဖြစ်တဲ့ Caitlyn Jenner (အဆန်းကြီးနော် ?) ကတော့ သူ့ social media account တွေမှာ အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှထွေထွေထူးထူး မတင်ထားပါဘူး။ Kylie ရဲ့ အမေနှစ်ယောက်ကြားမှာ ကလေးမွေးမယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်သဘောထားချင်းမတူညီမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ Caitlyn ကအနိုင်ရသွားပုံပါပဲ။
Kylie သမီးလေးဟာ ရှစ်ပေါင်နဲ့ကိုးအောင်စတောင်ရှိပြီး ဒေသစံတော်ချိန် ၄နာရီနဲ့၄၃မိနစ် (ညနေပိုင်း) မှာမွေးခဲ့တာပါ။ Kylie အမတော်တွေကလေးမွေးခဲ့ကြတဲ့ Cedars-Sinai ဆေးရုံကြီးမှာပဲ တက်မွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သမီးလေးမွေးချိန်မှာ Kylie ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေသာမက Travis ရဲ့ မိခင်ကပါလာစောင့်ပေးနေခဲ့ပြီး မိသားစုဝင်အသစ်ကလေးကို နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Previous Post: ‘Mission’ Impossible – Fallout’ ရဲ့ ပထမဆုံး Trailer ထွက်ပြီ
Next Post: အသစ်အသစ်သော ခံစားမှုတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Dimensions!!